Gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga waddani Maxamed Sidiiq Dhamme ayaa sheegay inuu ka tegay jagadii uu hayey kadib markii wakhtigii ka dhamaaday.
Maxamed Sidiiq Dhame ayaa lagu tilmaamaa dhalinyaradii ugu mayalka adkayd ee xisbigaasi ka tirsanayd, culayso la saaray iyo dhinacyo badan oo lagasoo maray oo ay mararka qaar ku jirtay xadhig may bedelin fikradiisii.
“Hoggaamintu waa qori isu dhiib, waxaan hoggaaminaayay dhallinyarada Xisbiga WADDANI shan sandood muddo xileedkii nala doortay wuu dhammaaday waxaana banneeyay saaka xafiiska dhallinyarada. Si hoggaan cusub loo doorto oo aanu u ilaalinno xeerka Xisbiga, dimuqraadiyada iyo in isbedel dhaco, waxaanu wareejinaynaa xafiiska dhallinyarada Xisbiga WADDANI.
Waxaan diyaar u ahay kaalin kasta oo aan u arko in aan buuxin karo Xisbiga, xisbinimaduna waa mabda’ iyo aaminaad aragti hoggaamineed. Waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo muddada na garab istaagay, waxaanan soo dhaweynayaa dhallinyarada Xisbiga ee leh hanka iyo hoggaaminta , waxaan soo jeedinayaa in la ilaaliyo midnimada, wadajirka iyo isku duubnaanta.”
Maxamed Sadiiq dhame.